Wiil uu dhalay Usaama oo sheegay inuu wado Fariin Nabad ah | maakhir.com
Wiil uu dhalay Usaama oo sheegay inuu wado Fariin Nabad ah
Riyad:- Wiil uu dhalay Wadaadka caanka ah ee Usaama Binlaadin ayaa shaaca ka qaaday inuu ku talo jiro sidii uu ugu kala dab qaadi lahaa Maslimiinta iyo wadamada Reer galbeedka ah, wiilkan oo lagu magcaabo Cumar Osaama Bunu Laadin, ayaa arintaasi soo bandhigay isaga oo haatan ku sugan magaalada Riyaad e cariga Sucuudiga.
Wiilkaas ayaa codsaday in loo magacaabo safiir qaabilsan heshiisiinta Muslimiinta iyo wadamada Reer Galbeedka,Ammbassador for Peace Between Muslims and West, arintaas ayaa waxa uu ku tel maamay inay horseedi karto nabad waarta oo la dhex dhego dadka Maslimiinta ah iyo Wadamada reer galbeedka ah.
Cumar Usaama ayaa waxa la sheegay inuu ka mid ahaan jiray Ururka uu aabihii hogaamiyo ee Al-Qacida, waxana uu Tababar ku soo qaatay Suudaan iyo Afqaanistaan, waxa uu sheegay inaanu aabihii mudo la xidhiidh tan iyo intii uu soo gaadhay Dalka Sucuudiga.
Wiilkaas ayaa waxa cadeeyay inuu qabo haweenay Muslimad ah taasi oo lagu magcaabo Zaina Alsabah oo jirta 53-sano, waxana la sheegay inay u leedahay 4-wiil iyo hala gabadh.
Arinta la yaabka ah ee ay wadaan Wiilkaasi uu dhalay Usaami Binlaadin iyo Xaaskiisa ayaa ah inay dhul gaadhay 5000-oo KM ay ku maraan fardo iyaga oo Fooshan si ay dadka Reer guurgaa ah ee dhulkaasi yaalay u gaadhsiiyaan Fariinta Nabad ah ee ay sidaan.
Mar aan saasi u fogayn oo ay wakaalada wararka ee AFP waraystay wiilkaasi ayaa waxa uu carabka ku dhuftay inay wadaan hawshaasi ay hayaan ilaa ay ka gaadhayaan runta ama natiijo.
war dadoow nabada raadiya waa soomalidee meeley ujeedaan iyo meeley kajeedaan lama yaqaano
« Nuur Cadde oo la filayo inuu Saacad ka dib Muqdisho soo gaadho
Cade Muuse oo shir saxaafadeed qabtay Maanta »